बिगुल न्यूज - DB, Author at बिगुल न्यूज | Page 171 of 273
बिगुल न्यूज - DB
होलीकै दिन राति खुकुरी प्रहार गरी थापाको हत्या
फागुन १८, २०७४ बिगुल न्यूज - DB
धनगढी । कैलालीको टीकापुरमा होली कार्यक्रममा सहभागी भएका एक व्यक्तिलाई खुकुरी प्रहार गरी गएराति हत्या गरिएकोे छ । सांस्कृतिक समाज टीकापुरको आयोजनामा स्थानीय खुलामञ्चमा होली कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा राति …
स्थगित भयो सलमान खानको नेपाल टुर: यसकारण नेपाल नआऊने भए सलमान
काठमाडौं । भारतीय चर्चित नायक सलमान खान नेपाल आउने कार्यक्रम स्थगित हुन पुगेको छ । नेत्र विक्रम चन्द ” विप्लव” नेत्तृत्वको नेकपाले सलमानलाई नेपाल नबोलाउन दिएको चेतावनीलाई कारण देखाउँदै सलमानले नेपाल …
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले काँग्रेस पार्टीले परिवर्तन खोजेको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ ले आज नेपालटारमा आयोजना गरेको ‘समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र नेपाली काँग्रेसको …
स्व. अभिनेत्री श्रीदेवीको पुनर्जन्म भएको दावी गरिएको भिडियो भाईरल ( यस्तो छ रहस्य )
एजेन्सी। असामाहिक निधन भएकी भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवीको अन्तिम संस्कार फाल्गुन १६ गते साँझ मुम्बईमा गरिएको थियो। उनको अन्तिम संस्कार भएको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै सामाजिक सञ्जालमा एउटी सानी बच्चीको भिडियो भाइरल भएको …
कुटेको झोकमा श्रीमतीले गरिन् श्रीमानको विष खुवाएर हत्या
खजुरा, बाँके। बाँके जिल्लामा मादकपदार्थ सेवन गरी दिनहुँ कुटपिट गर्ने श्रीमान्लाई आफ्नै श्रीमतीले विष खुवाएर हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । बाँके डुडुवागाउँपालिका–४ गडारियनपुरका ४० वर्षीया पतंगी गडरियाले आफ्नै …
यसकारण भएन आजको नेपाल र हङकङबीचको खेल !
फागुन १७, २०७४ बिगुल न्यूज - DB
काठमाडौँ । विश्वकप किर्केट छनोट खेल अन्तर्गत आज नेपाल र हङकङबीचको हुने भनिएको अभ्यास खेल नहुने भएको छ। जिम्बाबेको क्वेक्वे स्पोर्ट क्लबमा हुने भनिएको खराब मौसमका कारण खेल अवरुद्ध भएसँगै टस समेत नगरी …
यो हो पृथ्वीको पाताल लोक, जहाँ जमीनमुनि यसरी बस्छन् मानिस !
फागुन १६, २०७४ बिगुल न्यूज - DB
सानो हुँदा पाताल लोकका कहानीहरु त निश्चय पनि थुप्रै सुन्नु भएको होला। पाताल लोकका निकै रोमान्चक कहानीहरु हुने गर्थे, जुन आफु भन्दा ठूला व्यक्तिहरु तथा बाल कथाका पुस्तकबाट हामीले सुन्ने या …
विष्फोटक पदार्थसहित नागढुङ्गाबाट पक्राउ परे शाही
काठमाडौँ । प्रहरीले विष्फोटक पदार्थसहित यहाँ एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाले जाँचका क्रममा गएराति धादिङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा ३ ख ९७१९ नं को बसमा यात्रा …
गाईले बाच्छीमात्रै जन्माउने प्रविधि प्रभावकारी बन्दै
चितवन । धेरै दूध दिने ठूला गाईका बाच्छा व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको बेला अमेरिकाबाट भित्राइएको बाच्छी मात्रै जन्माउने वीर्य नेपालमा प्रभावकारी भएको पाइएको छ । नेपालको राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्द्र …
तत्काल संविधान संशोधनको वातावरण बनाऊ – राजपा
काठमाडौं । मधेश केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारलाई संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ । उसले आज (बुधबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार संविधान संसोधनप्रति संवेशनशील नभएको भन्दै अबिलम्ब संविधान संशोधनको वातावरण …
Previous 1 … 170 171 172 … 273 Next
९ तस्विरमा हेर्नुहोस् डा.केसीको समर्थनमा रहेको सामूहिक नागरिक सत्याग्रहमा यस्तो देखियो !
८ मिनेट अगाडि बिगुल न्यूज - ST
ह्वातै बढ्यो सुनको मुल्य, चाँदीको मुल्यमा गिरावट!
३ घण्टा अगाडि बिगुल न्यूज- SG
३ घण्टा अगाडि बिगुल न्यूज - ST
आठ हजार सवारी साधन कारबाहीमा !
बबरमहलमा स्कुटरले साइकललाई ठक्कर दिँदा साइकल यात्रुको मृत्यु !
विदेश देखि पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको विनियम दर ! (सूचीसहित)
१२ वर्षीय बच्ची ७ महिनादेखि २२ जना पुरुषहरुद्वारा सामूहिक बलात्कारको शिकार, यसरी आयो घटना बाहिर !
५ दिन अगाडि बिगुल न्यूज - DB
१ दिन अगाडि बिगुल न्यूज - ST
विश्वभरका खेलप्रेमीहरुको मन जितेर पनि गए रातिको खेलमा भाग्यले ठगिएको क्रोएसिया !
२० घण्टा अगाडि बिगुल न्यूज - DB